Oyena Nobangela Wemfazwe Nentlupheko
Imfazwe Eyatshintsha Ihlabathi
INQAKU ELINGUMXHOLO | IMFAZWE EYATSHINTSHA IHLABATHI
NgoNovemba 11, 1918, iMfazwe Yehlabathi I yafikelela esiphelweni. Amashishini avala, yaye abantu babedanisa ezitratweni. Kodwa loo mincili zange ihlale xesha lide. Emva nje kwaloo mfazwe, kwalandela omnye ubhubhane—obulala ngaphezu kompu okhupha iimbumbulu ezininzi ngexesh’ elinye.
NgoJuni 1918, amajoni aseFransi aphathwa sisifo esibulalayo ekuthiwa nguMbathalala. Kwathi kungadlulanga naxesha lingako, babe bubonakala ubungozi besi sifo. Ngokomzekelo, kwiinyanga nje ezingephi, esi sifo sasisele sibulele amajoni amaninzi asuka eMerika, ngaphezu kokuba utshaba lwenzayo. Amajoni awayevela emfazweni abuya nesi sifo, ngaloo ndlela sabe sisasazeka emhlabeni wonke.
Iminyaka eyalandela loo mfazwe yazaliswa yintlupheko nokuwohloka kwezoqoqosho. Emva kwemfazwe yehlabathi ngowe-1918, imimandla emininzi yaseYurophu yabethwa linxele likaKhetsekile. Ngo-1923, imali yaseJamani yayingasenaxabiso. Emva kweminyaka emithandathu, imeko yezoqoqosho yawohloka kuwo onke amazwe. Kusenjalo, ngo-1939, kwaqala imfazwe yehlabathi yesibini—iqala apho beziphele khona iingxwaba-ngxwaba zeyokuqala. Yintoni oyena nobangela wezi ntlekele?
UMQONDISO WEMIHLA YOKUGQIBELA
Iziprofeto zeBhayibhile zisichazela oyena nobangela weziganeko eziye zenzeka kwimbali, ibe kunjalo nangeMfazwe Yehlabathi I. UYesu Kristu wachaza kwangaphambili ixesha apho “uhlanga luya kuvukelana nohlanga,” ukunqongophala kokutya neendyikityha zokufa ziya kuzalisa umhlaba. (Mateyu 24:3, 7; Luka 21:10, 11) Wachazela abalandeli bakhe ukuba ezi ntlekele zaziya kuba ngumqondiso wemihla yokugqibela. Incwadi yeSityhilelo isichazela ukuba iintlekele ezenzeka emhlabeni ziqale ngemfazwe yasemazulwini.—Funda ibhokisi ethi, “Imfazwe Yasemhlabeni Nemfazwe Yasemazulwini.”
Le ncwadi ithetha ngabakhweli-mahashe abane, ngamaxesha athile kudla ngokuthiwa ngabakhweli-mahashe abane beSityhilelo. Abathathu kwaba bakhweli-mahashe bafanekisela iintlekele ezintathu awathetha ngazo uYesu kwangaphambili—imfazwe, indlala nendyikityha yokufa. (Funda ibhokisi ethi, “Ngaba Nyhani Amahashe Amane Ayaphala?”) Lilonke, imfazwe yehlabathi yokuqala yaba sisiqalo seenkxwaleko ezingekapheli. IBhayibhile isichazela ukuba oyena nobangela wazo zonke ezi zinto nguSathana. (1 Yohane 5:19) Ngaba uya kuze ayekiswe?
Incwadi yeSityhilelo iphinda isiqinisekise ukuba uSathana ‘ushiyekelwe lixesha elifutshane.’ (ISityhilelo 12:12) Yiyo loo nto enomsindo omkhulu yaye ebangela izinto ezibuhlungu apha emhlabeni. Phofu ke, kwa ezi ngxaki sizibonayo zingqina ukuba iintsuku zikaSathana zibaliwe.
UKUCHITHA IMISEBENZI KAMTYHOLI
Imfazwe Yehlabathi I yalitshintsha ihlabathi. Yaba sisiqalo sokugquba kweemfazwe, uqhankqalazo kunye nokungathenjwa kwabalawuli. Yaba bubungqina bokuba uSathana ugxothiwe emazulwini. (ISityhilelo 12:9) Lo mlawuli wehlabathi ungenakubonwa wazibonakalisa ukuba unguzwi-lakhe owaziyo ukuba iintsuku zakhe zibaliwe. Xa ezo ntsuku ziphela, zonke iingxaki ezabangelwa yiMfazwe Yehlabathi I ziya kusiphulwa neengcambu.
Iziprofeto zeBhayibhile ziyasithembisa ukuba uYesu Kristu, uKumkani wethu osezulwini, uza ‘kuyichitha imisebenzi kaMtyholi’ kungentsuku zatywala. (1 Yohane 3:8) Izigidi zabantu sele zithandazela ukuba uBukumkani bukaThixo bufike. Kuthekani ngawe? Obo Bukumkani buya kunceda abathembekileyo ukuba babone xa ukuthanda kukaThixo—kungekhona okukaSathana—kusenziwa emhlabeni. (Mateyu 6:9, 10) Xa kulawula uBukumkani bukaThixo akusayi kuphinda kubekho mfazwe. (INdumiso 46:9) Funda ngobu Bukumkani ukuze nawe ubone xa uxolo luzalise umhlaba wonke!—Isaya 9:6, 7.
Imfazwe Yasemhlabeni Nemfazwe Yasemazulwini
Kwiminyaka emininzi ngaphambi kweMfazwe Yehlabathi I, xa uYesu wayesemhlabeni, uSathana wamthembisa ukuba uza kumnika “zonke izikumkani zehlabathi.” (Mateyu 4:8, 9) UYesu akazange avume, ibe kamva wathi uMtyholi ‘ngumlawuli wehlabathi.’ (Yohane 14:30) Nompostile uYohane wabhala wathi, “Ihlabathi liphela lisemandleni ongendawo.”—1 Yohane 5:19.
Ekubeni uSathana uMtyholi engumlawuli wehlabathi, ngaba akukho sengqiqweni ukugqiba kwelokuba ungunobangela wemfazwe yehlabathi yokuqala kunye neentlungu eze nazo? Incwadi yeSityhilelo ithi nguye kanye owabangela iintlekele ezabakho ukususela ngo-1914. Khawuve xa iSityhilelo 12 sichaza ezinye zezi ziganeko:
Ivesi 7 Kubakho imfazwe emazulwini ephakathi kukaMikayeli (uYesu Kristu) kunye nenamba (uSathana).
Ivesi 9 UMtyholi, ‘olahlekisa umhlaba omiweyo uphela,’ uphoselwa phantsi emhlabeni.
Ivesi 12 “Yeha kuwo umhlaba nakulo ulwandle, ngenxa yokuba uhlile weza kuni uMtyholi, enomsindo omkhulu, esazi ukuba ixesha analo lifutshane.”
Amaxesha achazwe eBhayibhileni kunye neziganeko ezenzeka emhlabeni zibonisa ukuba le mfazwe yasezulwini yenzeka emva kokuba uBukumkani bukaThixo bamiselwayo ngo-1914. * Kuloo nyaka ubalulekileyo kwenzeka imfazwe emhlabeni nasemazulwini.
^ isiqe. 20 Funda isahluko 8 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova.
Ngaba Nyhani Amahashe Amane Ayaphala?
Ihashe elimhlophe, elikhwelwe ngukumkani wasezulwini. UKumkani uYesu Kristu uphalisa endleleni yobulungisa. (INdumiso 45:4) Into yokuqala ayenzileyo kukukhupha uSathana needemon zakhe emazulwini.—ISityhilelo 6:2; 12:9.
Ihashe elimbala ubumlilorha, elikhwelwe ngumntu onegunya ‘lokususa uxolo emhlabeni.’ (ISityhilelo 6:4) Ukususela ngo-1914 uluntu beluntyumpantyumpeka ezimfazweni imihla nezolo. Emva nje kweminyaka eyi-21 kuphele iMfazwe Yehlabathi I, kwabakho imfazwe yehlabathi yesibini neyabulala abantu abaninzi nangakumbi kuneyokuqala. Olunye uqikelelo lubonisa ukuba kwiMfazwe Yehlabathi II kwafa izigidi eziyi-60 zabantu. Ukususela ngo-1945, bekusoloko kukho iimfazwe zamakhaya, ibe nazo bezisuba imiphefumlo emininzi. Abanye ababhali-mbali baqikelela ukuba kwiimfazwe zeminyaka ye-1900 kuye kwafa abantu abangaphezu kwezigidi ezilikhulu.
Ihashe elimnyama, elikhwelwe ngumntu ophethe izikali ezibonisa indlala. (ISityhilelo 6:5, 6) Kwimfazwe yehlabathi yokuqala, kwafa abantu abayi-750 000 eJamani yindlala, kuba imikhosi elutshaba yalirhangqa elo ukuze kungangeni kutya. Ngo-1921 kwafa abantu baseRashiya abangaphezu kwezigidi ezibini bebulawa yindlala, ibe oko kwaye kwenzeka nakwamanye amazwe. Kuqikelelwa ukuba bamalunga nezigidi eziyi-70 abantu abaye babulawa yindlala kwiminyaka ye-1900. Nyaka ngamnye, kufa abantwana abazizigidi ezithathu abangaphantsi kweminyaka emihlanu ngenxa yokungondleki.
Ihashe eliluthuthu, elikhwelwe ngumntu ozisa ukufa ngezifo ezibulalayo. (ISityhilelo 6:8) UMbathalala waba sisifo sokuqala esabulala abantu abaninzi kwiminyaka ye-1900. Nangona kungaqinisekwanga ncam, olunye uqikelelo luthi bamalunga nezigidi eziyi-50 abantu ababulawa sesi sifo. Incwadi ethi Man and Microbes ithi: “Esi sesinye sezifo ezazingalawuleki kwezakha zakho kwimbali yoluntu. Nkqu nesifo esasibangela ukudumba nokuqaqanjelwa ngamadlala asizange sibulale abantu abaninzi kangaka ngexesha elingephi.” Ezinye izifo eziye zabulala amakhulu ezigidi zabantu kwiminyaka ye-1900 yingqakaqha, isifo seengcongconi kunye nesifo sephepha.